जीवन शर्माका छुवाछुत र विभेदको पर्खाल भत्काउन अभिप्रेरित गर्ने गीत | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७७ साल जेष्ठ १८ गते, आईतवार ०२:१९ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मनोरञ्जन भिडियो कला-साहित्य
कुनै पनि सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो २०७७ जेठ १० गते रुकुमको चौरजहारीमा घटेको पाशविक हत्याकाण्डको घटना । जाजरकोटका नवराज विकसहित पाँचजनाको चौरजहारीमा जसरी हत्या गरियो, एकजना अझै बेपत्ता छ्न, त्यो देख्दा लाग्छ नेपाली समाजभित्र पाशविक युगका अवशेषहरु अझै नि जीवित नै छन्।
अहँ, मान्छेले मान्छेमाथि त्यस्तो व्यवहार कदापी गर्न सक्दैन । त्यो त मानवता हराएका अपराधिक मनोवृत्तिका अमानवले मात्र गर्न सक्ने कर्म हो । जंगली, असभ्य र ढुङ्गे युगको झल्को दिने उक्त पाशविक र बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्डको जति सुकै शब्दमा निन्दा गरे पनि त्यो कमनै हुनेछ ।
नवराज आफ्नी प्रेमिकाको अनुरोधमा उनलाई लिन साथीहरुसहित चौरजहारी पुगेका थिए । तर, उनले आफ्नो पवित्र प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न पाएनन् । सामन्ती चिन्तन र कुसंस्कारले गाँजिएका जमातको पाशविक बर्बरतामा परेर नवराजका सपनाहरू पनि आफूसँगै भेरीनदीमा बग्न पुगे ।
अपराधिक जमातले नवराजसहित उनका चार साथीहरुलाई खेदाइखेदाइ ढुङ्गा, मुढा र घरेलु हतियार प्रयोग गरेर बर्बरतापूर्वक हत्या गर्यो । र, भेरीको भेलमा फालिदियो । एकजना अझै बेपत्ता छ्न । पाँचै जनाको लाशको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनीहरुलाई कुटपिट गरी मारेर भेरीनदीमा फालिएको प्रस्ट भएको छ । त्यो विभत्स हत्या काण्डको चौतर्फी बिरोध भएको छ । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सडकदेखि सदनसम्म ससक्त आवाज उठेको छ ।
उक्त घटनाको मुल कारण के हो ? थरी थरी मान्छेका थरी थरी भनाइ आइरहेका छ्न् । जसले जे भने पनि कुरा प्रस्ट छ, त्यो पाशविक घटनाको खास कारण हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको छुवाछुतको कुप्रथा नै हो । कथित उपल्लो जातको अहंकारी आवेगले नै त्यो जघन्य हत्याकाण्ड निम्ताएको हो ।
दलित समुदायको एक युवाले कथित उपल्लो जातको युवतीलाई प्रेम गरेर त्यो प्रेमलाई विवाहामा परिणत गर्न खोज्दा त्यसलाई अपराध ठानियो । र, प्रेमीलाई हत्या गरियो । कसैलाई प्रेम गर्नु पनि अपराध ? कस्तो तुच्छ सोचाइ छ त्यो समाजको । जातीय विभेदको पर्खाल, सामन्ती चिन्तन र संस्कारले हाम्रो समाजलाई कसरी गाँजिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई चौरजहारी घटनाले छरपस्ट पारिदिएको छ ।
सभ्य समाजको जो कोही नागरिकले पनि त्यो जघन्य हत्याकाण्डको विरोध नगरिरहन सक्दैन । हरेक तह र तप्काका सचेत नागरिकले यो घटनाको निन्दा गरिरहेका छ्न् । चौरजहारी नरसंहारविरुद्ध देशका विभिन्न भागहरुमा आन्दोलन उठिरहेका बेला त्यही आन्दोलनलाई बल पुग्ने किसिमको छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्ध सशक्त गीत ल्याएका छन् जनगायक जीवन शर्माले ।
कस्तो अनौठो कुचलन छ हाम्रो समाजमा, जातपातको आधारमा मान्छे मान्छे बीचमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । हात, खुट्टा, नाक, मुख शरीरका सबै अङ्ग उस्तै हुन्छ्न्, काटे रगत सबैको रातै आउँछ तर पनि एउटा जाति विशेषमा जन्मेको आधारमा उसलाई अछुत मान्छ यो समाजले । उसको श्रम चल्छ, सीप चल्छ, कला चल्छ, गला चल्छ, अरु सबै चल्छ तर उसले छोएको पानी चलाउँदैन यो समाजले ।
बिडम्बना, एक्काइसौं शताब्दीको यो वैज्ञानिक युगमा पनि नेपाली समाजमा भने मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नमान्ने यस्तो घृणित कुचलन अझै जीवित छ । जीवित मात्र होइन त्यो कुचलनबाट प्रताडित छ अझै नि हाम्रो समाज । यही कुचलन र कुसंस्कारका कारण हाम्रो समाजमा दिनदिनानु अमानवीय प्रकृतिका घटनाहरु समेत घटिरहेका छन् । त्यस्ता घटनाहरुले समाजलाई दुर्गन्धित बनाइरहेका छन् ।
जातिपाती छुट्टाउने विभेदको यो पर्खाल अब हामीले पूर्णरुपमा तोड्न जरुरी छ । मुट्ठीभर टाठाबाठा र फटाहाहरुले शोषणलाई कायम राख्न समाजमा बसालेको कुरीति हो यो । यस्ता कुरीति, कुप्रथा र कुसंस्कारहरुले हामीलाई सभ्य युगतर्फ अगाडी बढ्न दिँदैन । यस्ता कुथितिहरुलाई नामेट नपारी हामीले सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्दैनौं । मानिसको दिमागभित्र बेरिएर बसेको यो कुसंस्कारको जालो हटाउन सचेतनाका अभियानहरु चलाउदै जानु पर्दछ ।
कानुनका ठेलीहरुमा लेखेर मात्र यस्ता कुचलनहरु हट्ने छैनन्, लेखिएका ती कुराहरुलाई प्रभावकारी प्रकारले हामीले कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । छुवाछुत र जातीय विभेदलाई हाम्रो संविधानले डण्डनीय अपराध मानेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो रहने गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सचेतजनले दवावमुलक आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ ।
जातीय विभेद र छुवाछुतको व्यवहार गर्नेहरुले कुनै पनि अवस्थामा उन्मुक्ति नपाउन भनेर दरो खबरदारी गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । मुख्य कुरा समाजमा यस्ता कुप्रथाहरुविरुद्ध बारम्बार सचेतनाका अभियानहरु चलाइनु पर्दछ । जनगायक जीवन शर्माको ‘ज्यान खायो हजुर ज्यान खायो...’ बोलको गीतले मुलरुपमा त्यही भाव बोकेको छ ।
कुनै एउटा घटना विशेषमा केन्द्रितभन्दा पनि वर्षौदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाविरुद्धमा आफूले उक्त गीत सिर्जना गरेको बताउँछ्न् जनगायक शर्मा ।
‘हाम्रो समाजमा जातिपाती छुट्टाउने छुवाछुतको कुचलन, सामन्ती चिन्तन र संस्कारले युगौंदेखि जरा गाडेको छ । ती चिन्तन र प्रवृत्तिहरु जीवित रहेसम्म समाजलाई नै दुर्गन्धित पार्ने खालका घटना परिघटनाहरु घटिरहन्छ्न्,’ उनले भने, ‘विभेदरहित समतामुलक सभ्य समाज निर्माणका लागि हामीले समाजमा युगौंदेखि जरा गाडिरहेको छुवाछुत जस्तो कुचलन र पिछडिएको सामन्ती चिन्तन तथा संस्कारलाई मिल्काउनै पर्दछ । यो गीत त्यही आसयका साथ जनसमक्ष ल्याइएको हो ।’
गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते यो गीत जनगायक जीवन शर्माकै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ । त्यसै दिन सिर्जना गरेर, आफ्नै कोठाभित्र सामान्य हार्मोनियम मात्र बजाएर शर्माले यो गीत गाएका छन् । जसलाई दृश्याङ्कन अनु आचार्यले गरेकी हुन् ।
गीततको भिडियोमा देखिएका दृश्यभन्दा शब्दका भाव सुन्दर छ्न् । नेपाली समाजभित्र रहेका छुवाछुत र जातीय विभेदजस्ता कुप्रथालाई हटाउन अभिप्रेरित गरेको छ गीतले । देश, समाज र जनताको मन दुखेका बेला हरेक पटक सांगीतिक मल्हम लिएर आउने गरेका जनगायक शर्माले यसपटक जातिपाती छुटाउने चलनविरुद्ध फेरि अर्को सशक्त ऊर्जाशील गीत ल्याएका छन् । यस्तै, जनचेतनामुलक नयाँनयाँ ऊर्जाशील गीतहरु आगामी दिनमा पनि आइरहून्, उनको जनगीति यात्राले सफलताको शिखर चुम्दै जाओस्, हाम्रो हार्दिक शुभकामना ।
नेपाली चलचित्रका महानायक को ?